Global Voices teny Malagasy » Tian’ireo Mpanongam-panjakaka Thailandey Hanadino Ny Praiminisitra Ny Mpanoratra Gazety · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Novambra 2014 20:34 GMT 1	 · Mpanoratra Moui Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Thailandy, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika
Sarotra ny tsy hiresaka momba an'i Yingluck Shinawatra sy Thaksin Shinawatra ao anatin'ny vaovao tao anatin'izay andro vitsivitsy izay. Praiminisitra teo aloha tao Thailandy izy mianadahy ireo, firenena nisiana fanonganam-panjakana ara-miaramila tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Nihaona vao haingana tao Japàna ry Shinawatra ary niara-nisidiana hoany Shina mba hanao fizahantany . Amin'izay toerana alehan'ireo mpitarika roa tonta teo aloha ireo, toa hita fa manaraka azy ireo ny mpanoratra gazety, ary mitantara ny dian'izy ireo tahaka ny paparazzi.
Nilaza  i Suravitch Veerawan ao amin'ny ASTV fa tsy tokony hatahotra fampahalalam-baovao, izay tokony halalaka amin'ny fanehoana hevitra i Prayuth. Manontany ny antony mahatonga ny praiministra ao Thailandy nanapa-kevitra “hiady amin'ny mpanoratra gazety” i Pichate Yingkiattikun, filohan'ny tetikasa ao amin'ny “Siam Intelligence Unit”, vondrona mpandinika iray, ka miteraka tahotra eo amin'ireo fampahalalam-baovao ao amin'ny faritra ao amin'ny firenena satria tsy faly amin'izy ireo i Prayuth.
RT @forestmat  Aza mitatitra momba an'i Thaksin, hoy ny PM tamin'ny fampahalalam-baovao – The Nation http://t.co/u5HgWe3Afs  “torolalana” maro hafa hoan'ny gazety #Thailand 
Tamin'ny volana Mey lasa teo, nanambara fanovana izay nametra ny fahalalaham-pitenenana  ny governemanta miaramila ao Thaïlandy. Niampanga ny ezaka hanaovana fanasivanana  ny Komity Mpiaro ny Mpanoratra Gazety, ary miantso ny hamerenana tsy misy hatak'andro sy tsy misy fepetra ny fahalalahan'ny gazety ao amin'ny firenena.
Eny tokoa, nitolona mafy ny asa fanaovan-gazety Thailandey hatramin'ny nakan'i Prayuth fahefana. Ankoatra izany, misy andiana mpanoratra gazety mpanohana ny fitondrana miaramila  betsaka manohitra ny famoretana ny fampahalalam-baovao izay miha-mafy hatrany. Ahoana no handrosoan'ny mpanoratra gazety ao anatin'ny toe-javatra ankehitriny ao Thailandy izay mbola mifono misitery amin'ny ankapobeny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/11/07/65554/
 hanao fizahantany: http://www.bangkokpost.com/learning/really-easy/440043/thai-tourists-in-china
 tsy hitatitra : http://www.khaosodenglish.com/detail.php?newsid=1415011363
 “hiady amin'ny mpanoratra gazety” : http://www.siamintelligence.com/prayut-versus-media/
 fanovana : http://www.prachatai.com/english/node/3989
 nametra ny fahalalaham-pitenenana : https://globalvoicesonline.org/2014/07/28/thai-junta-issues-new-gag-order-against-media/
 mpanoratra gazety mpanohana ny fitondrana miaramila: https://globalvoicesonline.org/2014/08/19/thailands-military-junta-cements-its-power-with-undemocratic-interim-constitution/